Niteraka Hatezerana Ny Daroka Vehivavy Nataon’Ireo Polisy Bahrainita · Global Voices teny Malagasy
Niteraka Hatezerana Ny Daroka Vehivavy Nataon'Ireo Polisy Bahrainita	Voadika ny 22 Janoary 2013 17:13 GMT
Zarao: Nihevitra i Bahrain fa mandry fahalemana ihany mba hahafahany manatontosa hetsika ara-panatanjahatena rezionaly, kanefa notafiihan'ireo lehilahy mpiambina ny vehiivavy iray mpanao fihetsiketsehana tao Manama, afovoan'ny renivohitra. Tamin'ny volana Jolay farany teo, navotsotra tany am-ponja i Zahra Al-Shaikh rehefa notànana sy nampijaliana. Nilaza izy, taminà resadresaka niarahana taminà mpanao gazety Bahrainita mialokaloka any Lamees Dhaif fa teren'ny polisy hiara-hiasa amin'izy ireo izy. Tamin'izany fotoana izany, nosamborina tao anatin'ny fihetsiketsehana nandritra ny kilalao fifaninana baolina kitra ho an'ny firenena Golfe i Zahra, ny ekipa Emirà Arabo Mitambatra no nibata ny fandresena tamin'izany. Niely tamin'ny aterineto nandritra ny andron'ny lalao famaranana tamin'ny 18 Janoary ny vaovao, sary sy ny lahatsary momba ny fisamborana azy.
Mohammed, mpisera Twitter Bahrainita, nisioka izay natrehiny maso: @ba7rainiDXB: Vehivavy iray novelezin'ireo mpikarama an'adin'ny governemanta #Bahrain tao afovoan'ny renivohitra #Manama. Tanora sy lehilahy no mifanandrina amin'izy ireo.
Tamin'ny aterineto, maro ireo nanasokajy ny mpitandro ny filaminana ao Bahrain ho mpikarama an'ady – ho fanoharana ireo mpitandro ny filaminana vahiny sy polisy misahana ny rotaka avy amin'ny firenena hafa mitondra korontana ao amin'ny firenena.
Taty aoriana, naely ny lahatsary misy ny fisamborana ilay vehivavy izay mampiseho ireo polisy lehilahy misahana ny rotaka mihodidina azy sy mitaritarika azy satria mikikiaka sy mitomany izy no sady mandeha rà ny vavany (lahatsary nalefan'i Duraz14):
Lahatsary hafa avy aminà vehivavy samihafa niezaka nampiseho ny fomba nanesoran'ireo polisy ny sarondohany (hijab). Niezaka nanakana ireo polisy misahana ny rotaka ireo lehilahy manodidina. Tamin'ny fiafaran'ny lahatsary, lehilahy iray nifamaly taminà polisy noho ilay sarondoha ary nilaza ilay polisy fa hadisoany [ilay vehivavy] no antony (nalefan'i Mr14change)
Marobe ireo sarin'i Zahra nalefa tao amin'ny Twitter saingy tao anatin'ny fotoana fohy, nofafan'ireo mpiserasera ny sariny – izay mampiseho azy tsy misy sarondoha, ho fanajana. Ho solon'izany, ireo sariny misy ny volony mainty no navoaka:: “@SafaMohammed: ilay vehivavy nosamborina tao #Manama #bahrain, noesorina ny sarondohany ary mandeha rà ny vavany!!”
Tao amin'ny Twitter, nisioka vaovao momba an'i Zahra ny rahavaviny:
@ZAlshaikh_BH: Nosamborina i Zahra AlShaikh ary hiatrika ny mpampanoa lalàna rahampitso manoloana ireo fiampangana azy ho nanafika ireo polisy sy nanevateva ny asany ary nanao hetsika tsy ara-dalàna.
Tsy i AlShaikh ihany no vehivavy voasambotra. Nalefa tao amin'ny aterineto avy eo ny anaran'ireo vehivavy hafa voasambotra [ar]:
@iProtestor: Ireo vehivavy voasambotra: Halima AlSabagh, Zahra AlShaikh, Zainab Dhaim, Khadija Abdulnasser, Fatma Aljishi, Aqila AlMiqabi, sy i Fatma Abduljalil.
Poeta Aayat Alqormozi, izay efa voasambotra koa taloha noho ny famoronany tononkalo manohitra ny governemanta nandritra ny fihetsiketsehana, nisioka hoe:
@AayatAlqormozi: Mahavaky fo tokoa ny fisamborana an'i Zahra Al Shaikh amin'ny fomba feno herisetra tahaka izao. Mafy amintsika ny monina aminà firenena izay mampidera ny zon'ny vehivavy kanefa sady manitsakitsaka ny fahamendrehan'ny vehivavy
Noho ny fihetseham-po, nitoraka coktail molotov sy nanakana làlana tsy handehanan'ireo polisy misahana ny rotaka ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny tanàna kely ao Nuwaidrat, mba hahafahana manao hetsi-panoherana manoloana ny fisamborana sy herisetra natao an'i AlShaikh (lahatsary nalefan'i Nuwaidrat Feb):
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 14 ora izayLibanonaGV Face: Ny Zavatra Ilainao Fantarina Momba Ny Hetsi-panoherana Goavana “Maimbo Ianareo” Ao Libanona
FanoheranaMediam-bahoakaVehivavy sy Miralenta